အဆိုပါ .NET FRAMEWORK ကိုပလီကေးရှင်းတစ်ခု UNHANDLED ခြွင်းချက် - မည်သို့ဖြစ်စေ - 2019
လျှောက်လွှာကို Microsoft .NET Framework ကိုအတွက်ခြွင်းချက်ကိုင်တွယ်ရန်ပြဿနာကိုဖြေရှင်းပေး
Microsoft က .NET Framework ကိုများစွာသောအစီအစဉ်များနှင့်ဂိမ်းများများအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအစိတ်အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ Windows နှင့်အများဆုံး application များနှင့်အတူဿုံသဟဇာတဖြစ်ပါတယ်။ ချွတ်ယွင်းစေရန်မကြာခဏဖြစ်ပေါ်ပါဘူး, ဒါပေမယ့်နေဆဲဒီဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
သစ်တစ်ခု application ကို install လုပ်သည့်အခါအောက်ပါအတိုင်း, အသုံးပြုသူများ window ကိုကြည့်ရှုနိုင်သည် လျှောက်လွှာအတွက်« .NET Framework ကိုအမှား unhandled ချွင်းချက် "။ သငျသညျကိုနှိပ်တဲ့အခါမှာ "Continue"တပ်ဆင်အမှားလျစ်လျူရှုနေဖြင့်ဖြန့်ချိဖို့ကြိုးစားပေမယ့်မှန်မှန်ကန်ကန်အလုပ်လုပ်မည်မဟုတ်။
မိုက်ခရိုဆော့ဖ် .NET Framework ကို၏နောက်ဆုံးဗားရှင်းကိုဒေါင်းလုဒ်လုပ်
Microsoft က .NET Framework ကို Download လုပ်ပါ
အဘယ်ကြောင့်လျှောက်လွှာကို Microsoft .NET Framework ကိုတစ်ခု unhandled ခြွင်းချက်ရှိသလော
ရုံဤပြဿနာကိုအသစ်သော software ကို install လုပ်ပြီးနောက်ထိုသို့ထင်ရှားလျှင်, အမှုကြောင့်၌၎င်း, မ Microsoft က .NET Framework ကို၏အစိတ်အပိုင်းအတွက်ကြောင်းပြောချင်တာပါ။
အသစ်တစ်ခုကိုလျှောက်လွှာ၏ installation အတွက်လိုအပ်ချက်များကို
setting ဥပမာ, တစ်ဂိမ်းအသစ်တခုကိုသင်အမှားသတိပေးအတူ window ကိုတွေ့နိုင်ပါသည်။ ဂိမ်း၏ installation များအတွက်အခြေအနေများစစ်ဆေးရန်, ဤကိစ္စတွင်အတွက်လုပ်ဖို့ပထမဦးဆုံးအရာ။ အတော်လေးမကြာခဏနောက်ထပ်အစိတ်အပိုင်းများအလုပ်အစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သည်။ ဒါက DirectX ကို, C ++ စာကြည့်တိုက်ဖြစ်နှင့်ထို့ထက် ပို. ဖြစ်နိုင်သည်။
သူတို့သင်တို့နှင့်အတူ ရှိနေ. လျှင်စစ်ဆေးပါ။ မရလျှင်, တရားဝင် site မှ download လုပ်ဖြန့်ဖြူးထည့်သွင်းပါ။ ဒါဟာအစိတ်အပိုင်းများ၏မူကွဲခေတ်မမီတော့ဖြစ်ကြပြီး update လုပ်ခံရဖို့လိုအပျကွောငျးထိုကဲ့သို့သောနိုင်ပါတယ်။ ရုံထုတ်လုပ်သူရဲ့ website နှင့်သစ်တစ်ခုလွှဲသွားပါ။
ဒါမှမဟုတ်ကျနော်တို့ကိုအလိုအလျောက်ပရိုဂရမ်ကိုအပ်ဒိတ်လုပ်အထူး tools များ၏အကူအညီနှင့်အတူကလုပ်နိုင်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်, သင်အလွယ်တကူဤပြဿနာကိုဖြေရှင်းကူညီပေးပါမည်သည့်အသေးစား utility ကိုဆူမိုနပန်းသမားရှိ၏။
မိုက်ခရိုဆော့ဖ် .NET Framework ကိုပြန်လည်
ဤပြဿနာကိုဖြေရှင်းရန်, သင်အစိတ်အပိုင်းကို Microsoft .NET Framework ကို reinstall လုပ်ဖို့ကြိုးစားနိုင်ပါ။
တရားဝင် website ကိုသွားပြီးနောက်ဆုံးပေါ်ဗားရှင်းဒေါင်းလုဒ်ဆွဲပါ။ ထို့နောက်ကွန်ပျူတာကနေယခင် Microsoft က .NET Framework ကိုဖယ်ရှားလိုက်ပါ။ စံမာစတာ windose အလုံအလောက်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေကိုသုံးပါ။ လုံးဝဖိုင်တွေနဲ့ registry ကို entries တွေကိုကျန်ရှိသောစနစ်အထဲကဆေးကြောသန့်စင်သောအခြားအစီအစဉ်များပါဝင်ရန်လိုအပ်ကြောင်းကိုဖယ်ရှားရန်။ ငါ CCleaner ကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်ဤသူလုပ်ပါ။
အဆိုပါအစိတ်အပိုင်း၏ဖယ်ရှားရေးပြီးနောက်နောက်တဖန် Microsoft က .NET Framework ကို install လုပ်နိုင်ပါတယ်။
အမှားမှဦးဆောင်သည့်အစီအစဉ်နှင့်အတူအမှုကိုပြုခံရဖို့အတူတူလိုအပ်ချက်များကို။ တရားဝင် site ကိုမှ Download ပြုလုပ်ရန်သေချာစေပါ။ CCleaner ကိုအသုံးပြုပုံတူညီမူအရအပေါ်ဖျက်ခြင်း။
အတော်များများကဂိမ်းနှင့်အစီအစဉ်များရုရှားဇာတ်ကောင်ယူကြဘူး။ သင်၏ system ရုရှားနာမည် folder တစ်ခုရှိပါတယ်ဆိုရင်သူတို့ကအင်္ဂလိပ်ဖို့အတွက်ပြောင်းလဲရမည်ဖြစ်သည်။ သတင်းအချက်အလက်ဂိမ်းထဲကပစ်ချသည်အဘယ်မှာရှိသင့်ရဲ့အစီအစဉ်တွင်ကြည့်ရှုဖို့အကောင်းဆုံး option ကို။ ထိုသို့ပစ်မှတ် directory ကိုမှမသာအရေးကြီးသော, ဒါပေမယ့်လည်းအပေါငျးတို့သနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။
သင်သည်အခြားနည်းလမ်းကိုသုံးနိုင်သည်။ အတူတူဂိမ်း setting တွင်, ဖိုင်များများအတွက်သိုလှောင်မှုတည်နေရာကိုပြောင်းလဲ။ အင်္ဂလိပ်လိုဖိုင်အသစ်တစ်ခုဖန်တီးသို့မဟုတ်ရှိပြီးသားကိုရွေးချယ်ပါ။ ပထမဦးဆုံးအမှု၌ရှိသကဲ့သို့, ငါတို့လမ်းကြောင်းကိုရှုမြင်ကြသည်။ သေချာပါစေခြင်းငှါ, ကွန်ပျူတာနှင့် Re-run လျှောက်လွှာကို restart ချလိုက်ပါ။
များစွာသောအစီအစဉ်များနှင့်ဂိမ်းများ၏မှန်ကန်သောအလုပ်, ကိုတိုက်ရိုက်မောင်းသူများ၏ပြည်နယ်ပေါ်တွင်မူတည်သည်။ သူတို့မှာအားလုံးနေ့စွဲထဲကသို့မဟုတ်မဖြစ်ကြပါလျှင်, လျှောက်လွှာ .NET Framework ကိုအတွက် unhandled ခြွင်းချက်အမှားအပါအဝင်ကျရှုံးလိမ့်မည်။
ယာဉ်မောင်း၏ကြည့်ရန် status ကို task ကိုမန်နေဂျာအတွက်ဖြစ်လိမ့်မည်။ အဆိုပါပစ္စည်းကိရိယာများဂုဏ်သတ္တိများ, အ tab ကိုသွားပါ "ယာဉ်မောင်း" နှင့် update ကို click လုပ်ပါ။ ဒီတာဝန်လုပ်ဆောင်စေရန်, သင့်ကွန်ပျူတာတစ်ခုတက်ကြွအင်တာနက်ဆက်သွယ်မှုရှိရမည်။
ကိုယ်တိုင်ဤအမှုကိုမ, သင်အလိုအလျှောက်မောင်းသူ update ကိုများအတွက်ပရိုဂရမ်ကိုအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ငါ Driver Genius အစီအစဉ်ကိုကြိုက်တယ်။ သငျသညျခေတ်မမီတော့ယာဉ်မောင်းများနှင့် update ကိုလိုအပ်သောအဘို့သင့်ကွန်ပျူတာစကင်ဖတ်စစ်ဆေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
အလွန်မကြာခဏအသုံးပြုသူများကသူတို့အနည်းဆုံး system ကိုလိုအပ်ချက်များကိုသို့မစူးစမျးခြင်းမရှိဘဲ, ဆော့ဖ်ဝဲထည့်သွင်းပါ။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, လွန်း, တက bug ကို Unhandled applications များနှင့်အခြားသောဖြစ်နိုင်သည်။
သင့်ရဲ့အစီအစဉ်အတွက်တပ်ဆင်လိုအပ်ချက်များကိုကိုကွညျ့ပါနဲ့သူ့နှင့်အတူနှိုင်းယှဉ်။ ဒီဂုဏ်သတ္တိအတွက်ဖြစ်နိုင်ပါတယ် View "My Computer ကို".
အကြောင်းပြချက်ကဒီသည်ဆိုပါက, သင် program ကိုတစ်ခုအစောပိုင်းကဗားရှင်းကိုထည့်သွင်းရန်ကြိုးစားနိုင်ပါသည်, သူတို့ system ပေါ်တွင်လျော့နည်းတောင်းဆိုမှုများဖြစ်လေ့ရှိပါတယ်။
အဆိုပါ .NET Framework ကို, Processor ကိုအတွက်အမှား၏နောက်ထပ်အကြောင်းရင်းရှိနိုင်ပါသည်။ ကွန်ပျူတာနှင့်အလုပ်လုပ်နေစဉ်, အဆက်မပြတ်စတင်ခဲ့ပြီးနှင့်ကွဲပြားခြားနားသောဦးစားပေးအစီအစဉ်များရှိသည်သောအမျိုးမျိုးသောလုပ်ငန်းစဉ်များရပ်ဆိုင်းသွားခဲ့သည်။
ထိုပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင်စေရန်, သငျသညျကို log in ဖို့လိုအပ် "Task Manager ကို" နှင့်လုပ်ငန်းစဉ် tab မှာ, သင့်ဂိမ်းကိုက်ညီသောတဦးတည်းကိုရှာပါ။ ညာဘက်မောက်စ်ခလုတ်ကိုနှိပ်ခြင်းအားတစ်ဦးအပိုဆောင်းစာရင်းဖြစ်လိမ့်မည်။ တွေ့ရှိရန်လိုအပ်သောကြောင့် "ဦးစားပေး" အဲဒီမှာတန်ဖိုးသတ်မှတ်ထား "အမြင့်"။ အရှင်ဖြစ်စဉ်ကိုထိရောက်မှုတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်အမှားပျောက်ကွယ်သွားလိမ့်မည်။ နည်းလမ်း၏တစ်ခုတည်းသောအားနည်းချက်ကအခြားပရိုဂရမ်များ၏စွမ်းဆောင်ရည်အနည်းငယ်ကျဆင်းသွားကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။
ကျနော်တို့မှားယွင်းမှုတစ်ခု .NET Framework ကို၏ဖြစ်ရပ်အတွက်ရေပန်းအစားဆုံးကိစ္စရပ်များကိုပြန်လည်သုံးသပ်ခဲ့ကြ "လျှောက်လွှာထဲမှာတစ်ခု unhandled ချွင်းချက်"။ အဆိုပါပြဿနာကိုသျောဘုံမဟုတ်ပေမယ့်ဒုက္ခတွေအများကြီးတတ်၏။ မ option ကိုအကူအညီပေးခဲ့သည်မဟုတ်ခဲ့လျှင်သင် install လုပ်ထားပြီဖောက်သည်ထောက်ခံမှုအစီအစဉ်များသို့မဟုတ်ဂိမ်းရေးလိုက်နိုင်ပါတယ်။
ဗီဒီယို Watch: Strv m42-57 Alt марафон ЗИМНЯЯ ОХОТА - 10 задача Прем танки6уровня world of tanks #15 (အောက်တိုဘာလ 2019).